Warshadda Miiska Kafeega - Soosaarayaasha Miiska Kafee Shiinaha, Soo-saareyaasha
Miisaska qaxwaha ee kor-u-kaca ayaa na siiya wax aad u qaali ah oo badanaa la iska indhatiro: in yar oo keyd ah oo dheeri ah oo inta badan wax ka beddela. Waa mid ka mid ah sababaha miisaska qaxwada leh khaanado ku dheggan iyo kulaylku ay caan u yihiin oo loo qadariyo.
Alaabtaada ku keydi indhaha indhaha martidaada adiga oo qolkaaga fadhiga ka dhigaya meel dhexe oo daxalaysan ah oo ka ilaalin doonta booskaaga mid aan hagaagsanayn. Miiskeena qaxwada leh ee kor loo qaadayo ee kor ku xusan, qurxinta qolkaaga fadhiga waligiis isku mid ma noqon doono.
Waxaa loogu talagalay qofka ugu yar ee u baahan kaydinta ugu badan, miiskan qaxwada ee casriga ah ayaa ku habboon qol kasta oo lagu noolaado. Lagu dhameeyay lacquer cad oo jilicsan, xariiqyadeeda nadiifka ah ee nadiifka ah waxay ku xiran yihiin chrome casri ah. Naqshadayaashu waxay jecel yihiin kor u qaadkeeda fudud.
Miiskan kafee ee ugu sarreysa kor u qaadista is-dhexgalka wuxuu isku daraa madadaalo iyo karti u leh dadka. Muujinta dusha sare ee la isku hagaajin karo oo ku siinaya dhererka ugu fiican adiga markaad shaqeyneyso ama aad cabeyso koob bun ah, iyo keydinta qarsoon ee miiska dushiisa iyo booska lagu keydiyo ee ka hooseeya miiska dushiisa taas oo ka dhigaysa qaybtan quruxda badan inay shaqeyso sidoo kale, waa u qalantaa isagoo!